Dowlada Maraykanka oo sheegtay inay duqaysay fariisamo Al-shabab. – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Maraykanka oo sheegtay inay duqaysay fariisamo Al-shabab.
Anwar Mohamed October 2, 2018
War ay soo saartay Dowladda Mareykanka ayay ku sheegtay in Diyaaradaheeda aan duuliyaha laheyn ay Duqeymo la beegsadeen Saldhig ururka Al-shabaab ay ku lahaayeen Gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta dalka Soomaaliya.
War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ee magacooda loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in Duqeyntaan oo dhacday Isniintii shalay aheyd, ay si gaar ah uga dhacday degaan 40-KM dhanka Waqooyi Bari kaga began Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.
Mareykanka ayaa sheegay in Duqeyntan lagu dilay 9 xubnood oo ka tirsan Dagaalyahan ururka Al-shabaab, waxaana intaasi raaciyeen Taliska Maraykanku inay socdaan baaritaano dheeraad ah, si loo soo bandhigo magacyadooda iyo dhamaan xogaha kale ee ku saabsan raga weerarkaas lagu dilay.
Wuxuu kale oo Mareykanku qoraalkiisa ku sheegay in fulinta howlgaladaan ay garab ka siiyeen Ciidanka gaarka ah ee Kummaandooska Soomaaliya ee Danab.
Warka ka soo baxay taliska maraykanka ee AFRICOM waxaa sidoo kale lagu sheegay inuusan jirin qof shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay duqaymahaas, maadaama bartilmaameedka uu ahaa mid qorsheysan.
Diyaaradaha dagaalka dowlada Mareykanka ayaa bilihii aan ka soo gudunay waxay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan googabaha ay ku sugan yihiin dagaalameyaasha Shabaab gaar ahaan deegaanada Hoos taga gobolada Jubooyinka.
Al-shabaab ayaa dhawr mar lagu bartilmaameedsaday degaano iyo Degmooyin ka tirsan Gobolada dalka Soomaaliya oo ay in mudo ah ku sugnaayeen waxaana jiray xubno ka tirsan oo weeraradaas la sheegay in lagu dilay.
← Ciidama amaanka magaalada Dhuusamareeb oo gacanta ku dhigay qaar ka mid ah wadayaasha Bajaajta.
DHAGEYSO Xarunta talo soo jeedinta Soomaaliya oo ka hadashay khilaafka maamulada iyo dowlada dhexe. →